Iyo yakanakisa yakachipa vacuum yekuchenesa 2022: yekutenga gwara uye zvinoshamisa zvinopihwa
zvakachipa vacuum cleaners
mutsvairo vacuum cleaner
2 mu 1
Unoda here tenga vacuum cleaner yakachipa? Musika wevacuum cleaner wakura nekukurumidza nekufamba kwemakore. Isu takakwanisa kuona kuti kusarudzwa kwevacuum cleaners pamusika kwakakura sei. Kune akawanda uye akawanda akasiyana mabhureki nemhando dziripo. Vese vane maitiro avo uye muzviitiko zvakawanda vane mamwe mashandisiro chaiwo, asi kusarudzwa kwacho kwakawedzera. Saka vashandisi vane zvakawanda zvekusarudza kubva.
Kana isu tichienda kunotenga nyowani vacuum cleaner, kusarudzwa kunogona kuve kwakaoma. Kunyangwe paine akati wandei maficha anodiwa nemutengi wese. Tinoda yemhando yevacuum cleaner asi isingadhure. Izvozvo zvinowanzova chido cheruzhinji rwevanhu. Nechikonzero ichi, tinokusiya pazasi nesarudzo yakachipa vacuum cleaners.
Iwo ese emhando mhando asi ayo mitengo inowanikwa. Saka kuti kuvandudza vacuum cleaner yako hakufungidzire kushanda kwakanyanyisa. Isu tinokuudza zvimwe nezve ese mamodheru pazasi.
Zvakanakisa zvakachipa vacuum cleaners
Isu takaita sarudzo yemamodheru akati wandei. Ese iwo mamodheru anomira kunze kwekuve nemutengo unowanikwa zvakanyanya kune vashandisi, asi pasina izvi zvinoreva kusiya mhando. Pazasi tinokusiya iwe netafura ine yakanyanya kutsanangurwa madhizaini eimwe neimwe yemhando idzi. Mushure metafura tinotaura nezvemumwe nomumwe wavo mumwe nomumwe zvakadzama.
Kutenda kune idzi data iwe unogona kuwana zano rakajeka pamusoro peiyo modhi inogona kunge iri iyo iwe yaunonyanya kufarira kutenga.
Cecotec Robot Vacuum Cleaner uye ...
Lefant F1 Robhoti Vacuum...
Vacuum Broom pasina ...
Cecotec Vacuum cleaner isina...
Iwo akanakisa akachipa vacuum cleaners
1 Zvakanakisa zvakachipa vacuum cleaners
2 Iwo akanakisa akachipa vacuum cleaners
2.1 Cecotec Kunaka 1090 Conga
2.9 Rowenta Air Force Yakanyanya RH8828
3 rudzi rwe aspirator
3.6 kubva mumadota
3.7 2 mu 1
3.8 hapana bag
4 Best vacuum cleaner mhando
5 Nzira yekusarudza vacuum cleaner
5.3 Sefa mhando
5.5 Hapana chinokupwisa?
Pakangotaridzwa zvakanyanya kukosha zveimwe neimwe yeaya vacuum cleaners zvaratidzwa, isu tinokwanisa kuenderera mberi nekutaura nezve imwe neimwe yemhando idzi zvakadzama. Nenzira iyi unogona kudzidza zvakawanda nezvemhando idzi uye mashandiro avo. Saka, kana paine inoenderana nezvido zvako, unozokwanisa kuiziva nekukasika.
Cecotec Kunaka 1090 Conga
Isu tinovhura runyorwa neiyi robhoti vacuum cleaner kubva kuCecotec, rudzi rwunozivikanwa muchikamu chekugadzira akasiyana marobhoti vacuum cleaners. Iyo modhi iyo, semarobhoti ese, isarudzo yakasununguka. Nekuti zvese zvatinofanira kuita kuzvironga uye zvinotanga kuchenesa pasi pemba yedu. Inochenesa muna kana uye ine yakazara ye6 yekuchenesa modes. Haisi chete vacuums, asiwo mops uye kutsvaira. Naizvozvo, ita kuchenesa kwakazara kweimba. Mukuwedzera, inoshanda zvakakwana pamhando dzose dzepasi.
Paunenge uchichenesa mumba, nekuda kwehunyanzvi hwayo, haizopesani nefenicha, vanhu, makona kana kudonha pasi masitepisi. Naizvozvo, tinogona kugara kumashure uye kurega robhoti iite basa rayo. Iine bhatiri rinopa huwandu hwemaminetsi e160. Kana bhatiri rave kupera, robhoti rinodzokera kugadziko raro kuti rizadze zvizere. Saka hatifaniri kunetseka nezvazvo. Iine tangi repamusoro-soro, iyo inotibvumira kutsvaira imba yose tisingade kuibvisa.
Sesefa ine HEPA sefa, izvi zvinoreva kuti tinogona kuichenesa zviri nyore. Ingoiisa pasi pepombi wosiya iome. Saka, yakatochena uye yakagadzirira kushandiswa zvakare. Iyo inzira yakasununguka kwazvo inotibvumira kuchengetedza mari pamasefa. Robhoti iri rinomirawo nekuti harina ruzha. Robhoti rinouya nezvinhu zvinosanganisirwa, zvinosanganisira mabhurashi akati wandei, base yekuchaja, remote control uye adapta.
Kunyangwe isiri iyo yega pane iyi runyorwa kuti ive, chimwe chezvakanakisa maficha eiyi Ecovacs floor cleaner ndeyekuti inoenderana neAlexa uye nharembozha, saka tinogona kuziva pairi nguva dzese. Pamusoro pezvo, inewo imwe mhando yehungwaru, mune iyi Smart Navi 3.0 Navigation inoshanda nekutenda kune laser iyo inokutendera iwe kuziva kwauri kuenda uye. gadzira mepu yemba yedu.
Sezvatataura, neECOVACS app virtual zvipingamupinyi zvinogona kugadzirwa kubva kune mobile kuisa mberi kana kuvhara nzvimbo kuitira kuti robhoti richenese patinenge tichida chete. Kune rimwe divi, isu tinogona kushandisa imwe yeayo mana ekuchenesa modhi kuti tive nechokwadi chekuti inochenesa kupi, sei uye rini patinoda.
Chechipiri tinowana modhi iyi kubva mumhando imwe chete, kunyangwe panguva ino iri 2-in-1 broom vacuum cleaner.Izvi zvinoreva kuti inosanganisira handheld vacuum cleaner yatinokwanisa kusveta tobva tachenesa dzimwe nzvimbo dzakanyatsojeka se sofa kana zvigaro zvemotokari. Nekuda kweizvi isu tinokwanisa kuita zvakadzama kuchenesa imba. Inomira pachena pakushandisa cyclonic tekinoroji, tekinoroji inoipa simba rakawanda. Mukuwedzera, izvi zvinoreva kuti haisi kurasikirwa nesimba nekufamba kwenguva. Chimwe chinhu chinopa runyararo rwepfungwa kune vashandisi.
Iyo yakareruka modhi uye iri nyore kwazvo kushandisa kumba. Inorema zvishoma, izvo zvinoita kuti igone kudzoreka zvakanyanya. Kunyanya kana tine imba ine masitepisi, kuitira kuti zvisakanganise kuti titakure kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Iyi modhi inoshanda netambo, uye tambo yainayo inoyera 6 metres. Saka isu tinokwanisa kufamba-famba nemba zvakanaka uye pakati pemakamuri pasina kugara tichivhara nekuburitsa. Pamusoro pezvo, iyi broom vacuum cleaner inoshanda nemazvo pamhando dzese dzenzvimbo, kusanganisira pasi pemapuranga.
Iine deposit ine simba re 1 litre. Izvi zvinotipa mukana wakakwana wekuchenesa imba yese kanopfuura chiitiko chimwe pasina dambudziko. Mukuwedzera, kubviswa kwetangi kuri nyore uye ndiyo nzira yatinoichenesa nayo. Izvi zvinoitikawo nemasefa, ayo kuchengetedza kuri nyore. Sezvo iri HEPA sefa. Nokudaro, tinofanira kungoachenesa. Panyaya yeruzha, haisi iyo yakangwara zvakanyanya, asi inoburitsa huwandu hwakafanana hweruzha seyakajairwa vacuum cleaner. Zviri nyore kuchengeta nekuti hazvitore chero nzvimbo. Iyi vacuum cleaner inouya nemamwe akati wandei ma nozzles anosanganisirwa.
Panzvimbo yechitatu tinowana iyi yakajairika Rowenta vacuum cleaner, zvirinani maererano nemagadzirirwo. Inoshandisa tekinoroji yecyclonic, iyo inopa simba rakakura uye simba rekukweva. Mukuwedzera, haisi kurasikirwa nesimba iri nekufamba kwenguva. Naizvozvo, tinogona kunakidzwa nekushandiswa kwayo kwenguva yakareba nekunyaradza kwakanyanya. Chivimbiso chakakosha kuvanhu vazhinji. Inoshanda zvakanaka pamhando dzese dzepasi, asi kunyanya zvakanaka pauriri hwakaoma (dombo, tile ...). Saka kana iwe uine iyo mhando yeuriri, ndiyo yakanakira vacuum cleaner kwavari.
Inoshanda netangi ine simba re 1,5 litres yatinokwanisa kuburitsa zviri nyore. Mukuwedzera, imari yakakwana yekukwanisa kuchenesa imba yose pasina dambudziko. Iyo ine zvakare HEPA sefa, zvinoreva kuti tinogona kuigeza. Ingoisa sefa pasi pepombi kuti ubvise tsvina. Kana izvi zvangoitwa, tinoisiya iome uye toidzosera muvacuum cleaner. Zvese izvi pasina kumborasa simba rekusveta. Rowenta vacuum cleaner ine tambo, ine 6,2 metres tambo. Izvi zvinotibvumira kufamba-famba mumba zviri nyore zvikuru.
Inorema 6,8 Kg, asi usanyengerwa nemufananidzo, sezvo iri nyore modhi yekubata uye kufamba-famba mumba. Nekuda kwekugadzirwa kwayo nemavhiri, inonyatso famba vacuum cleaner. Mukuwedzera, kana zvasvika pakuchengeta hazvitore nzvimbo yakawandisa, saka zviri nyore kuwana nzvimbo yekuichengeta. Iyo inogadzira ruzha rwakafanana seyakajairwa vacuum cleaner, saka hapana zvinoshamisa mune izvo. Haisi ruzha runotyisa.
Panzvimbo yechina tinowana iyi vacuum cleaner iyo inonyanya kushandiswa ingave yeindasitiri yekutsvaira yekuchenesa, kunyangwe isu tichigona kuishandisa mumamiriro mazhinji akasiyana. Asi, inomira pachena kunyanya yekuve modhi ine simba kwazvo inopa simba guru rekukweva. Nenzira iyi iwe uchakwanisa kubvisa tsvina yose yakaunganidzwa nyore nyore uye zvinobudirira zvikuru. Pamusoro pezvo, inoshandawo netsvina yakanyorova, saka inotitendera mamwe mashandisiro akawanda pane yakajairika vacuum cleaner panyaya iyi. Saka inosiyana-siyana.
Iyo ine yakakura tangi tangi, ndosaka yakagadzirirwa kushandiswa kwemaindasitiri uko kwakawanda tsvina inoungana. Izvi zvinotipa sarudzo yekukwanisa kuchenesa nzvimbo dzakakura pasina kuburitsa maminetsi mashoma ega ega. Saka kuchenesa kunoshanda zvakanyanya munzira dzese. Pamusoro pekutsvaira, zvakare ine basa rekufuridza rinoshanda zvakanyanya. Saka iwe unogona kuita zvakadzama kuchenesa.
Iyo modhi ine huremu hwe7,66 kg. Asi, zvisinei nenhamba iyi, imhando yatinogona kubata nekureruka kukuru. Pamusoro pezvo, nekuda kwekugadzirwa kwayo-mavhiri mana, inofamba zvakanyanya uye yakagadzikana. Naizvozvo, haizodonha kana kupenengura chero nguva isu tichiishandisa. Saka isu tine hanya chete nekuchenesa. Iine tambo yakareba mamita mana. Haisi iyo yakareba, asi inotipa zvakakwana kufamba.
Iyi Braava 390t yakagadzirirwa kuchenesa makamuri makuru akawanda. Iine katatu kukwesha pass uye iadapt yayo 2.0 ine navigation cubes inobatsira iyi robhoti diki kuchengeta nzvimbo yaro. Sesarudzo, tinogona kusarudza kupasa kamwe chete kana tichingoda kubvisa tsvina, guruva, vhudzi remhuka yedu uye allergens kana kushandisa katatu kwayo kukwesha kusvika 33m²
iRobot Braava 390t, robhoti...
Kana ari mamwe maficha, anosanganisira 4 microfiber machira, maviri acho ndeekukwesha uye maviri ekukorobha, zvinoreva kuti inogona kuomesa mop.
Iyi modhi inotevera ndeye yakajairwa vacuum yekuchenesa iyo inomira pachena nekupa inoshanda kwazvo uye isina dambudziko kushanda. Iyo yakawedzera kirasi modhi yekushandisa nayo kuchenesa imba. Inotibvumira kutsvaira pamhando dzose dzepasi uye ine simba rakakwana. Haisi iyo ine simba zvakanyanya pane iyo rondedzero, asi haisiye chero tsvina isina kutsvaira chero nguva. Saka inozadzisa chinangwa chayo zvakakwana nguva dzese.
Iine tangi ine simba re 1,5 litita, iyo inotibvumira kuchenesa imba kakawanda kusvikira yazara. Kudhirowa uye kuchenesa dhipoziti iyi iri nyore kwazvo. Saka hazvidi kuchengetedzwa kwakanyanya. Chinhu chimwe chete chinoitika neHEPA sefa iyo inosanganisira. Kana tikaona kuti ine tsvina yakawandisa yakaunganidzwa, zviri nani kuinyorovesa, rega iome uye ishandise zvakare. Nenzira iyi inodzoka kuva nehukuru hwekusveta simba sezuva rekutanga. Nzira iri nyore kwazvo.
Inoshanda netambo, munyaya iyi ine 5 mita cable. Izvi zvinotibvumira kufamba-famba mumba zvakanaka uye zvinotipa rusununguko rwakawanda. Kana iri uremu, modhi iyi inorema 4,5 kg. Saka, haisi imwe yevacuum cleaners inorema zvikuru, kuitira kuti zvive nyore kufamba-famba mumba uye kuenda nayo kana tichifanira kukwira masitepisi. Mukuwedzera, nekuda kwekugadzirwa kwayo nemavhiri, inofamba zvikuru, saka, hazvidikanwi kunetseka uye kuitakura nguva dzose. Inogadzira ruzha rwakafanana neyechinyakare vacuum cleaner. Mukuwedzera, iyi modhi inouya nemidziyo inosanganisirwa.
Munzvimbo yakapfuura tinowana iyi inobatwa nemaoko vacuum cleaner. Vacuum cleaner yehukuru hwakadzikiswa uye yakagadzirirwa isu kuti tiishandise munzvimbo dzisingasvikike neakajairika vacuum cleaner. Nokudaro, isarudzo huru yekushandisa pane sofa kana muzvigaro zvemotokari. Saiti dzine kucheneswa kwakaoma uye kunoda kunyatsojeka. Kutenda kune iyi modhi zvichave nyore kusvika kunzvimbo idzi kuti dzigare dzakachena.
Kune diki diki modhi ine simba rakawanda. Saka zvichatibatsira kupedzisa kunyangwe netsvina yakaoma. Saka sofa richagara richipenya. Mukuwedzera, inorema zvishoma, zvichiita kuti kushandiswa kwayo kuve kwakagadzikana uye nyore. Inotarisika zvakanyanya, iyo inobatsirawo zvakanyanya, sezvo basa rekuchenesa munzvimbo idzi harisi nyore nguva dzose. Iyi modhi inoshanda isina tambo. Iyo ine bhatiri ine kuzvimiririra kwemaminetsi makumi matatu atinogona kuchaja.
Iine dhipoziti yatinogona kuburitsa chero nguva zviri nyore. Mukuwedzera, kuchenesa nekugadzirisa kwayo kuri nyore kwazvo. Izvo zvakafanana zvinoenda kune sefa inosanganisirwa. Isefa inowachwa. Saka kana tikaona kuti inopera simba, tinosuka sefa pasi pepombi, regai iome uye tidzorere zvakare. Nokudaro, inoshanda zvakakwana zvakare. Inosanganisira akati wandei ma accessories, senge ma nozzles enzvimbo dzakasiyana uye mabasa.
Rowenta Air Force Yakanyanya RH8828
Pekupedzisira tinowana iyi Rowenta mutsvairo vacuum cleaner. Iyo inoshamisa modhi nekuti ine simba kwazvo, zvekuti isu tichakwanisa kubvisa guruva netsvina yakaunganidzwa mumba medu. Inoshanda zvakanaka pamhando dzese dzepasi nekuda kwebhurashi rayo, rakagadzirirwa kudaro. Naizvozvo, kunyangwe uine matanda pasi, unogona kuishandisa pasina kunetseka. Inotivimbisa kuchenesa kunoshanda uye kunogara.
Rowenta Air Force Yakanyanya...
Iyi modhi inoshanda isina tambo. Iyo ine bhatiri ine huwandu hwe45 maminetsi. Nguva inofanira kukwana kuchenesa imba yese. Kamwe bhatiri rapera, tinoiisa pamutero. Zvinotora maawa masere kuti anyatsochaja, ingangove yakareba. Naizvozvo, zviri nani kugara uchichaja iyo usiku. Saka unogadzirira mangwanani kana uchida kuchenesa imba. Iyi modhi ine tangi inobviswa ine simba re 0,5 litita.
Iyo ine zvakare HEPA sefa yatinogona kuchenesa. Saka iwe unofanirwa kuinyorovesa pasi pepombi, rega iome uye uiise zvakare. Nekuda kweizvi tinogona kunakidzwa nekutsvaira kwevacuum zvakare sekunge raive zuva rekutanga uye inotsvaira nesimba guru uye nemazvo. Kana iri ruzha, inoita ruzha kupfuura mamwe mamodheru ari parunyorwa, kunyangwe isiri ruzha runogumbura kana musoro.
rudzi rwe aspirator
Sezvatakambotaura, kune akawanda marudzi evacuum cleaners aripo nhasi. Imwe neimwe ine zvayo zvayo inoita kuti ive nani kune mamwe mamiriro. Naizvozvo, zviri nyore kujekesa nezve rudzi rwevacuum cleaner yatinoda kana yatiri kutsvaga. Sezvo ichaita kuti kutsvaga kwedu kuve nemazvo. Isu tinokuudza zvakawanda nezvemhando dzakasiyana dzevacuum cleaners pazasi.
mvura vacuum cleaner
2 mu1 vacuum cleaners
maindasitiri vacuum cleaners
Mota vacuum cleaner
mvura sefa vacuum cleaners
vacuum cleaners inobatwa nemaoko
vacuum cleaners isina bag
Robhoti vacuum cleaner uye mop
Ona sled vacuum cleaners
Aya ndiwo echinyakare vacuum cleaners atinoziva tese. Mupfungwa iyi, ivo vanochengetedza iyo yekare dhizaini uye chimiro. Kunyangwe tekinoroji yakafambira mberi zvakanyanya uye ivo vanowanzove vazvino uye vane simba. Iwo mamodheru anoshanda nemazvo pamhando dzese dzepasi uye ayo isu tisiri kungotsvaira guruva remba, asiwo marudzi ese etsvina.
Ona broom vacuum cleaners
Aya mavacuum cleaners anomira pachena nekutevedzera chimiro chemutsvairo. Saka dzakamira uye dzakarebesa. Dzinowanzo mhanya pamagetsi ebhatiri uye dzine simba shoma pane yechinyakare vacuum cleaner. Kunyangwe ivo vakamira pachena nekuda kwekureruka, kugoneka uye nekubata kwavo kukuru kwepamusoro.
Ona robhoti vacuum cleaner
Kirasi iri kuwana kuwanda kwekuvapo mumakore achangopfuura. Ivo isarudzo yakasununguka kwazvo sezvo zvese zvatinofanira kuita ndezvekuzvironga uye robhoti ichatarisira kuchenesa imba isu. Vanoshanda nemabhatiri uye vanogara vachimira kunze kwechimiro chavo chakatenderedzwa muchimiro chendiro. Kunyangwe, iwo zvakare anodhura zvakanyanya kupfuura echinyakare vacuum cleaner.
Aya madiki-saizi vacuum cleaners aunogona kubata neruoko rwako zvakanaka. Iwo akagadzirirwa kusvika kumakona ayo akajairika vacuum cleaner isingasviki, senge zvigaro zvemotokari kana sofa. Zvinogoneka, huremu hudiki uye mutengo wazvo unowanzo kuchipa. Mamwe mavacuum etsvimbo anouya neakavakirwa-mukati vacuum.
Ona vacuum cleaners inobatwa nemaoko
Ona cyclone vacuum cleaners
Cyclonic vacuum cleaners inomira kunze kwekugadzira chamupupuri chemhepo chinowedzera simba rekusveta, chinobatsira kuparadzanisa tsvina zviri nyore uye zvakare. haina kurasikirwa nekubudirira nekufamba kwenguva.
Ona maash vacuum cleaners
Aya marudzi evacuum cleaners akagadzirirwa kusveta madota kubva kumoto, barbecues kana mamwe marudzi emabasa anokonzera kuunganidza madota. Vane zvakanyanya kunyanya kushandiswa, kunyange zvazvo vachisveta guruva uye tsvina. Asi basa rayo guru nderokubvisa madota kana sawdust.
Ona 2-in-1 vacuum cleaners
Aya mavacuum cleaner umo tinowana main vacuum cleaner neanobatwa nemaoko. Iwo anowanzo mamodheru emutsvairo anouya neyakasanganiswa handheld vacuum cleaner. Saka iwe unogona kuchenesa imba yose zvakanyanya. Sezvo iwe uine vacuum cleaner yepasi uye imwe yenzvimbo dzakadai sofa kana makona asingasvikike.
Ona vacuum cleaners isina bag
Imhando yevacuum cleaner yatinoona mumhando zhinji. Panzvimbo pekuva nemabhegi echinyakare anochengeterwa tsvina, ane mudziyo unobviswa. Nenzira iyi, kana yazara, tinobudisa tangi uye tinoidurura. Saka, hatishandisi mari pamabhegi. Mukuwedzera, kuchengetedzwa kwemadhipoziti aya kuri nyore kwazvo.
Ona vacuum cleaners yemvura
Isu takatarisana nemhando yakakosha yevacuum cleaner sezvo yakanakira avo vanhu vane matambudziko neallergies kuguruva kana mite. Inotibvumira kuchenesa imba, asi inobatsirawo kuchenesa mhepo nekuda kwesefa yayo yemvura. Kutenda kwazviri tine kucheneswa kwakadzama kwemba uye tinova nechokwadi chekuti mhepo inochengetwa yakachena sezvinobvira.
Ona maindasitiri vacuum cleaners
Aya marudzi evacuum cleaners akagadzirirwa zvakanyanya kuchenesa munzvimbo dzekutengesa, mahotera kana maresitorendi kana mumaindasitiri. Sezvo vachimira kunze kwekuva nesimba guru rinogona kutora zvose. Nekuda kwesimba iri, kuchenesa kwakanyanya uye kunoshanda kunowanikwa. Nokudaro, kushandiswa kwepamba haisi iyo nzira yakanakisisa yekushandisa nayo.
Best vacuum cleaner mhando
Kana isu tichitsvaga yekutsvaira nyowani tinotarisa zvakanyanya pamhando. Dzimwe nguva tingada kutenga modhi yemhando imwechete yatinayo kana kuti tinobheja pamhando dzinozivikanwa. Pasina kupokana, iyo brand ine pesvedzero huru pane dzakawanda zviitiko. Sezvo isu tichiwanzo sarudza mhando dzatinoziva kana dzatinovimba nadzo. Kusarudzwa kwemhando kwakafara kwazvo nhasi, kunyangwe paine vamwe vanonyanya hunyanzvi mune imwe mhando yevacuum cleaner.
Kurota vacuum cleaner
Ndiyo inogadzira mhando yevacuum marobhoti par kugona. Ndiani asingazivi roomba vacuum cleaners? Vanga vari mumusika kweanenge makore makumi maviri nemashanu, saka vane ruzivo rwakakura. Mukuwedzera, marobhoti avo anowanzova akanyanya kufambira mberi uye ndiwo anopa kuita kwakanakisa. Saka kana iwe uchitsvaga robhoti vacuum cleaner, pasina mubvunzo ndiyo mhando yaunofanirwa kusarudza.
Imwe yemhando dzinonyanya kuzivikanwa pamusika. Iyo yakasimba ine ruzivo rwakakura mumakore, saka mhando dzayo ivimbiso yehutano uye kushanda kwakakodzera. Vanogadzira mhando dzakawanda dzevacuum cleaners, kubva kune yechinyakare chireyi, kusvika kumitsvairo, paruoko uyezve dzimwe 2 mu1. Tsvaga pano mhando dzakanakisa dze Rowenta vacuum cleaners.
Imwe mhando inozivikanwa nevashandisi vakawanda uye yakafanana nemhando. Ivo vane ruzivo rwakakura mumusika uye vane tsigiro yevatengi, sezvo iri mhando iyo vazhinji vanobhejera pairi nekuti vanoziva kuti vachawana chigadzirwa chemhando. Ivo vanogadzira akawanda marudzi evacuum cleaners (broom, sledge, handheld, indasitiri ...), pano iwe unogona kuona iyo Bosch vacuum cleaners inosarudzwa nevashandisi.
Iro zita rinogona kusanzwika serinozivikanwa kune vakawanda, asi ivo ikambani ine ruzivo muchikamu. Mukuwedzera, iyo karcher vacuum cleaners Ivo vanomira kunze kwekugadzira ane simba kwazvo vacuum cleaners ayo anogara achipa kuita kukuru. Saka kana iwe uchitsvaga vacuum cleaner mune simba ndiro chinhu chakakosha, ndiyo imwe yemhando yekufunga nezvayo. Ivo zvakare vanogadzira akawanda marudzi (maindasitiri, madota, mota, sledge ...).
Icho chiratidzo icho chikamu chikuru chevatengi vanoziva zvakare. Kazhinji nekuti ifemu ine zvigadzirwa zvinomira kunze kwemhando yavo uye kuita kwakanaka nekufamba kwenguva. Saka tenga dyson vacuum cleaner zvakare ivimbiso uye sarudzo yakachengeteka yekutendeukira kwairi kana uchitsvaga vacuum cleaner. Ivo vanogadzira akasiyana marudzi evacuum cleaners (sledge, indasitiri, ruoko, mutsvairo ...).
Kunyange ecovacs vacuum cleaners ivo vatsva, chokwadi ndechekuti nzira yavo yekufambisa, software uye mutengo wemakwikwi zvakavaita imwe yezvakanakisa sarudzo kune avo vari kutsvaga robhoti vacuum cleaner. Kana iwe uchida kutenga imwe, usazeza kutarisa mhando dzekambani iyi.
Nzira yekusarudza vacuum cleaner
Paunenge uchitenga vacuum cleaner unofanirwa kutora nhevedzano yezvinyorwa muaccount. Sezvo nenzira iyi tinogona kuita sarudzo nekunyatsojeka pasina kutya kutenga mhando isina kunaka. Asi, zvakakosha kuti tifunge nezvese uye kufunga nguva dzese kuti chii chaizvo chatiri kutsvaga. Zvese izvi zvinoita kuti kutsvaga kwedu kuve nyore. Sezvo zvakakosha kufunga nezvevacuum cleaner sekudyara kweimba yako, haudi kutenga chigadzirwa chisingakwane zvaunoda.
Imwe tsanangudzo inonyanya kukosha pakusarudza vacuum cleaner isimba. Pese patinoverenga zvakatemwa zvevacuum cleaner tinoona kuti simba racho rinoratidzwa. Kunyangwe zvakakosha kuibvunza, isu tinofanirwa kutora iyo nhamba sechiratidzo. Haisi chinhu chinogara ichitiudza kana modhi ine simba rakawanda.
Kune mienzaniso iyo pamapepa ine simba shoma uye chaizvoizvo ivo vanoshuva zviri nani. Nokuda kwechikonzero ichi, zvakanaka kuti tifunge nhamba yavanowanzoratidza pamusoro pesimba, asi tinofanira kuitora sechiratidzo chesimba ravo chairo.
Chinotifadza ndechekuti vacuum cleaner ine simba. Sezvo nenzira iyi tichakwanisa kupedzisa netsvina uye guruva rinoungana pamba nekukurumidza uye zvakasununguka. Asi, isu hatidi zvakare vacuum cleaner ine simba rakawandisa. Nekuti izvi zvinoita kuti inamatire kune ese marudzi enzvimbo. Zvakanaka, vacuum cleaner ine simba regulator. Nenzira iyi tinogona kuona simba ratinoda kushandisa zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Kazhinji, tambo dzevacuum cleaners (iyo dzakabatanidzwa kune mains) dzine simba kudarika bhatiri-powered. Saka inyaya yekufunga nezvayo. Izvi hazvireve kuti vari nani, nekuti mabhatiri-powered vacuum cleaners anoyamwawo zvakanaka. Asi zvakakosha kuti tizive izvi uye titore izvi zvakadzama.
Pane zvimwe zvinhu zvinogona kutibatsira zvakanyanya pakusarudza imwe vacuum cleaner pane imwe. Aya ndiwo maitiro anogona kunge asina kukosha kwakafanana sesimba kana mhando, asi izvo zvakare zvine pesvedzero pakuita sarudzo. Nokudaro, zvinokosha kuti tirambe tichiafunga.
Maneuverability uye nyore kushandisa kwakakosha. Tinoda kukwanisa kufamba-famba mumba zvakanaka nguva dzose. Kusafanira kudhonza vacuum cleaner kana kuti inorema zvakanyanya. Zvakare kuti haipindike patiri kuishandisa. Naizvozvo, mhando yezvinhu izvi zvinofanirwa kuongororwa. Kunyanya kuti haina kunyanyokuremera iwe, nekuti kana zvisina kudaro basa rekuchenesa imba richava rakaoma zvikuru kupfuura zvariri.
Kugadziriswa uye kucheneswa kwevacuum cleaner zvakare imwezve tsanangudzo yekufunga nezvayo. Sezvo tichida chimwe chinhu chisingade nguva yakawandisa. Kana tine dhipoziti, chimwe chinhu chine mhando dzakawanda, kuchenesa nekugadzirisa zviri nyore. Ingobvisa tangi, riise uye rinyorovese kuti ubvise chero tsvina yasara. Basa riri nyore rinongotora maminetsi mashoma. Mukuwedzera, tinochengetedza sezvo tisingafaniri kutenga mabhegi.
Mhando dzakawanda dzine chiedza uye chiratidzo chebhatiri. Aya ndiwo mamwe mashoko anogona kutibatsira kuita kuti kushandiswa kwevacuum cleaner kunyanyoshanda. Izvo pasina mubvunzo zvinhu zvakanaka uye zvinobatsira. Kunyangwe ivo vasiri kana kuti havafanirwe kuita sarudzo. Zvirinani kwete kana zvichireva kuti mutengo wevacuum cleaner wakakwira.
Imwe tsanangudzo inokosha muchiitiko chaunotenga tambo yevacuum cleaner ndeyokuti iwe unofunga nezvehurefu hwetambo. Sezvo ingave ipfupi kwazvo uye izvi zvinokumisa iwe zvakanyanya panguva yaunochenesa. Nekuti pese paunochinja makamuri unofanirwa kusunungura zvakare. Saka tambo refu isarudzo yakanyanya kugadzikana mukuita.
Mazuva ano vacuum cleaners vane masefa. Rudzi rwesefa chinhu chisingatarisirwi nevakawanda, asi chinhu chakakosha kwazvo. Nekuti inogona kutungamirira kukuchengetedza kwakakosha mumari nekugadzirisa. Saka zvakakosha kuti titarise rudzi rwesefa ine vacuum cleaner yatiri kutsvaga.
Chinonyanya kuzivikanwa nhasi ndechekuti ine HEPA sefa. Imhando yesefa iyo inotora tsvina yakawanda. Asi zvakare, tinogona kuzvichenesa zviri nyore saka unogona kuramba uchiishandisa kwenguva yakareba. Mukuwedzera, nzira yekuchenesa rudzi urwu rwesefa iri nyore kwazvo. Tinongofanira kuinyorovesa, rega iome uye idzose zvakare muvacuum cleaner. Nzira iri nyore.
Isu tinewo mafirita eblue light, aripo mune mamwe marudzi evacuum cleaners seaya emvura. Vanogonawo kucheneswa uye kuva nepamusoro-soro yekutora. Pamusoro pekubatsira kuchenesa mhepo. Asi ivo vanogumira kune mamwe chaiwo chaiwo marudzi evacuum cleaners.
Mamwe mavacuum cleaners ane mafirita asina HEPA certified. Mhando iyi yemasefa haigone kucheneswa, saka nguva nenguva tinomanikidzwa kuishandura. Chimwe chinhu chisina kugadzikana kune vashandisi. Mukuwedzera, iko kutambisa mari iyo isingakoshi mune dzakawanda zviitiko.
Naizvozvo, zvinodikanwa kuti isu tibvunze rudzi rwesefa ine vacuum cleaner. Sezvo sefa yatinogona kuchenesa ndiyo yakanyanya kutiitira.
Zvine musoro, mutengo zvakare iwo ruzivo rwakanyanya kukosha kune vashandisi. Sezvo zvichienderana nebhajeti yedu tine mimwe miganhu uye panogona kunge paine mamodheru atisingakwanise. Naizvozvo, zvakakosha kuti tizive kuti ndeapi mamodheru atinokwanisa kusvika, kunyanya mune mamwe marudzi evacuum cleaners.
Kana iwe uchitsvaga robhoti vacuum cleaner, mitengo inowanzokwira kupfuura yakajairika mhando. Zvakare, muzviitiko zvakawanda zvinodarika mazana mana emaeuro. Kunyangwe paine mhando dzine mhando kubva kungopfuura mazana maviri emaeuro. Saka imari yenguva refu, nekuti inogara kwenguva refu. Asi, zvakakosha kuti ufunge nezvazvo.
Kune vakajairwa vacuum cleaners yemitengo yese. Tinogona kuwana vacuum cleaners kubva ku80-90 euros inotipa mhando yakanaka. Kunyangwe zvinonyanyozivikanwa ndezvekuti zvinodhura zvinodarika zana remaeuro, pakati pe100 ne100 euros tinowana mhando zhinji pamusika. Mutsara umo mune zvakasiyana-siyana asi umo isu tinogona kufamba zvakanaka.
Kana usati wawana vacuum yekuchenesa inoenderana nezvauri kutsvaga, isu tine chokwadi chekuti uchaiwana mune inotevera kusarudzwa kwezvigadzirwa:
Tsvaga ese mavacuum cleaners aripo 🙂
Kune mamwe marudzi chaiwo, akadai semaindasitiri kana wet vacuum cleaners, mitengo inowanzoti yakakwira. Kunyangwe pasina misiyano yakakura. Asi zvakakosha kuti uzive zvinoitika, kudzivirira zvisingafadzi zvinoshamisa mune ramangwana. Chikamu chakanaka ndechekuti akawanda uye akawanda mabhureki ari kutangisa anokwanisika mamodheru. Kuti zvive nyore kune vese vashandisi kuti vazviwane.
Chero zvazvingaitika, kana izvo zvaunoda ndezvekuchengetedza pakutenga kwevacuum yako nyowani, pane zviitiko mukati megore umo isu tinogona kuwana zvinonaka zvinopihwa. Mamwe emazuva ano ndeaya:
Black Friday mune vacuum cleaners
Cyber ​​​​Monday mune vacuum cleaners
Prime Day mune vacuum cleaners
Naizvozvo, tinowana zvakachipa vacuum cleaners pamusika. Kune mhando dzine mitengo inotangira kubva ku60 euros mune dzimwe nguva. Asi, mazhinji anowanzo ari muchikamu chiri pakati pe100 ne200 euros. Chinhu chakanaka ndechekuti mhando yevacuum cleaners nhasi yakakwirira. Saka kunyangwe mamodheru ane mutengo pazasi 100 euros anokupa kuita kwakanaka.